ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေ - Lifestyle Myanmar
Home General Knowledge ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေ
ကမ္ဘာကြီးက ဘယ်လောက်တောင်ပြောင်းလဲသွားသလဲဆိုတာကို ဖော်ပြနေတဲ့ ခေတ်ကိုထင်ဟပ်စေတဲ့ ရုပ်ပုံလေးတွေ
လေကြောင်းခရီးသွားလာမှုကို ချမ်းသာတဲ့သူတွေသာ အသုံးပြုခဲ့တဲ့အချိန်ကို မှတ်မိပါသလား ? ဒါမှမဟုတ် အိမ်ပြင်မှာ ထွက်ဆော့ရတဲ့ ကလေးဘဝကို သတိရမိပါသလား? ၂၀၁၇ခုနှစ်က စစ်တမ်းတစ်ခုအရ အသက်၁၂ မှ၁၅နှစ်ကလေးတွေဟာ ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းဖြင့် တစ်ပတ်ကို ၁၂.၂နာရီဝန်းကျင်လောက် သုံးကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ နည်းပညာတွေ တိုးတတ်လာတာနဲ့အမျှ ကမ္ဘာကြီးက ပြောင်းလဲသွားသလို လူတွေရဲ့အမူအကျင့်တွေ၊ ဓလေ့တွေကလည်း ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပါတယ်။ ဥပမာ- စမတ်ဖုန်းတွေ၊ နည်းပညာတွေ မတိုးတတ်ခင်တုန်းက မိုးအေးအေးနဲ့ စောင်ခြုံပြီး ကာတွန်းစာအုပ်ဖတ်ရတဲ့ ကလေးဘဝက အရသာကို ယခုခေတ်ကလေးတွေ သိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ယခုခေတ်မှာ ကလေးတွေဟာ စာအုပ်အစား ဖုန်းတွေ၊ အင်တာနက်တွေနဲ့ အချိန်ကုန်လာကြလို့ပါ။ ဒါ့ကြောင့် ယခင်အချိန်တုန်းကနဲ့ ယခုအချိန်မှာ ကမ္ဘာကြီးဟာ ဘယ်လောက်တောင် ပြောင်းလဲသွားလဲဆိုတာကို ရုပ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ပုံလေးတွေကို သင်မြင်တဲ့အခါ ယခင်က လွမ်းဆွတ်ဖွယ်အချိန်လေးတွေကို သတိရမိနေမှာ မလွဲပါဘူး။
၁။ လူသားများနှင့် သူတို့ရဲ့ကွန်ပြူတာ အသွင်အပြင်
ယနေ့ခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေကို မကြာခဏ တွေ့ကြုံလာရပြီး အဝလွန်ခြင်းကလည်း စိုးရိမ်စရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။ပါတယ်။ ဒါက ကွန်ပြူတာပေါ်မှာ အရမ်းကို မှီခိုလာကြပြီး ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်တွေကို ကွန်ပြူတာပေါ်မှာပဲ အချိန်ကုန်လာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ သူတို့ကို လုံးဝစွဲလမ်းနေပါပြီ။
လမ်းခွဲမှုတစ်ခုပေါ်မှာ နာကျင်ခံစားရခြင်းဆိုတာ အတိတ်က အရာတစ်ခုပါ။ မျိုးဆက်သစ်တွေဟာ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာတွေနဲ့ လူတွေအပေါ်မှာ ပူဆွေးလွမ်းဆွတ်နေခြင်းမရှိဘဲ လက်တွေ့ကျလွန်းနေကြပါပြီ။ သူတို့ဟာ စူးစမ်းရှာဖွေသူတွေနဲ့ စွန့်စားမှု ရှာဖွေသူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ အသည်းကွဲတာကို ခရီးသွားတာနဲ့ ဖြေဖျောက်ကြပါတယ်။
ယခုမှာ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်အရမ်းချစ်ကြတဲ့ စုံတွဲတွေတောင်မှ ဝေးကွာမှုက အချိန်ကြာလာရင် သူ့အလိုလို အချစ်တွေ သွေးအေးသွားတတ်ကြပါတယ်။ ယနေ့မှာ စုံတွဲတွေအကြား အကြီးမားဆုံးအတားအဆီးက နည်းပညာ သုံးစွဲမှုတွေ တိုးမြှင့်လာလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ဘဏ်အကောင့်ထဲကနေ ပိုက်ဆံထုတ်ဖို့ လူတန်းရှည်ကြီး တန်းစီပြီး စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ အချိန်ကို မှတ်မိပါသလား? ယခင်က ပိုက်ဆံတစ်ခါထုတ်ဖို့ စာရွက်စာတမ်းတွေ အများကြီးနဲ့ အချိန်ကုန်ခံစောင့်ဆိုင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ယနေ့မှာတော့ အလွယ်တကူငွေထုတ်လို့ရတဲ့အပြင် ဘယ်အချိန်သွားထုတ်ထုတ် ရတာကြောင့် အချိန်လည်း ကုန်စရာမလိုတော့ပါဘူး။
ရုပ်ရှင်ရုံထဲမှာ ခြင်ကိုက်ခံပြီး ရုပ်ရှင်ထိုင်ကြည့်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေကို မေ့လိုက်ပါတော့။ ယနေ့မှာ အဲကွန်းအေးအေးလေးနဲ့ 3D ၊ 4D ရုပ်ရှင်တွေ အဆင့်မြင့်မြင့် ကြည့်နိုင်သလို ကိုယ့်ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ကားထဲမှာတောင် ရုပ်ရှင်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကို drive-in theaters လို့ခေါ်ပါတယ်။
၆။ ကျောင်းတွေမှာ စာသင်တဲ့အခါ
အရင်တုန်းကလို စာမရလို့ ဆရာမအပြစ်ပေးမလား? ကြိမ်လုံးနဲ့ရိုက်မလား? လို့ စိုးရိမ်ကြောက်လန့်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဥပဒေတွေ၊ နည်းပညာတွေ တိုးတတ်လာတာနဲ့အမျှ ဆရာ/ဆရာနဲ့ ကျောင်းသားတွေဟာ ပျော်ပျော်ပါးပါး စာသင်လို့ရနေပါပြီ။
၇။ လူဦးရေ ထူထပ်မှု
ယနေ့ Public places တွေမှာ စုပြုံပြွတ်သိပ်နေကြပါပြီ။ ကမ္ဘာ့ရဲ့ဒေသအများအပြားမှာ လူဦးရေ တိုးပွားများပြားလာတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ယခင်ကလို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တိုက်ကြီးဆောက်ပြီး အေးအေးချမ်းချမ်းနေလို့မရတော့ပါဘူး။ ယနေ့မှာ လူဦးရေထူထပ်လာတာနဲ့အမျှ အိမ်အကြီးတွေကို အသေးစားတိုက်ခန်းများဖြင့် အစားထိုးလာကြပါပြီ။ ပထမတစ်ချက်က ကန့်သတ်နေရာတွေနဲ့ ငွေကြေးတတ်နိုင်မှုတွေ ကျဆင်းသွားခဲ့ကြလို့ပါ။
၉။ မိတ်ဆွေတွေကို စကားပြောတဲ့အခါ
ကျွန်တော်တို့မှာ ယခုအခါ သူငယ်ချင်းနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ အချိန်တောင် မရှိကြပါဘူး။ ဟဲလိုလို့ ပြောဖို့ ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေပေါ်မှာ မှီခိုနေကြရပါတယ်။
၁၀။ ကလေးတွေ ဘယ်လိုဆော့ကစားလဲ
တစ်နေ့တစ်နေ့ ကစားရမယ့်အချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေရတဲ့ ကလေးဘဝကို မှတ်မိပါသလား? အရင်တုန်းက ကလေးတွေက အတူတူကစားကြပြီး ကစားဖို့ အပြင်သွားရလေ့ရှိပါတယ်။ ဒါက ကလေးတွေအတွက် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ လေ့ကျင့်ခန်းကိုသာ ပေးတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကိုလည်း ပိုမိုအားကောင်းစေခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်လည်း ယနေ့ကလေးတွေရဲ့ရင်းနှီးမှုက သူတို့အကြိုက်ဆုံး ဗီဒီယိုဂိမ်းရဲ့ ရီမုကွန်ထိုးပေါ်မှာသာ ရှိနေပါတယ်။
တစ်ယောက်ယောက်နဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ တယ်လီဖုန်းအော်ပရေတာနှင့်အတူ နိုင်ငံရပ်ခြားခေါ်ဖို့ ကြိုတင်စာရင်းပေးရတဲ့ အချိန်တွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ သင့်အိပ်ကပ်ထဲက တစ်ပြားတစ်ချပ်မှမကုန်ဘဲ video call ခေါ်လို့ရပြီး live chat လို့ ရနေနိုင်ပါပြီ။
အရင်က ပျော်ရွင်ဖို့အတွက် လမ်းပေါ်မှာ ကစားတာ၊ အိမ်မှာ ပါတီလုပ်တာ၊ ပျော်ပွဲစားထွက်ရတာတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယနေ့မှာ ကလေးတွေအားလုံးရဲ့ ပျော်ရွင်မှုနဲ့ မျှဝေမှုက ဗီဒီယိုဂိမ်းတွေ၊ မိုဘိုင်းဖုန်းတွေနဲ့ ကွန်ပျူတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
စုပုံနေတဲ့ ဖိုင်တစ်ထပ်ကြီးနဲ့ ရုံးမှာ အချိန်ကြာကြာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေကို ယနေ့ အိမ်မှာသက်တောင့်သက်သာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ ရွေးချယ်မှုများနဲ့ အစားထိုးလာကြပါပြီ။ ယနေ့နည်းပညာကြောင့်ပဲ အလုပ်လုပ်ရတာ ပိုမိုလွယ်ကူလာပြီး အချိန်ကုန်သက်သာလာပါပြီ။
၁၄။ မိသားစု တည်ဆောက်မှု
အိမ်ထောင်ကျပြီး မိသားစုနဲ့တစ်အိမ်ထဲ စုနေကြတဲ့ ဓလေ့ဟာ တဖြည်းဖြည်း အတိတ်မှာ ကျန်ခဲ့ပါပြီ။ ယနေ့မှာ အများစုဟာ နျုကလီးယား မိသားစုတွေပါပဲ။
သင့်အတွက် ဒီဆယ်စုနှစ်ကာလအတွင်းမှာ ဘယ်လိုတွေ ပြောင်းလဲသွားပါသလဲ? သင့်ရဲ့အတွေ့အကြုံလေးများကို မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
ကမ်ဘာကွီးက ဘယျလောကျတောငျပွောငျးလဲသှားသလဲဆိုတာကို ဖျောပွနတေဲ့ ခတျေကိုထငျဟပျစတေဲ့ ရုပျပုံလေးတှေ
လကွေောငျးခရီးသှားလာမှုကို ခမျြးသာတဲ့သူတှသော အသုံးပွုခဲ့တဲ့အခြိနျကို မှတျမိပါသလား ? ဒါမှမဟုတျ အိမျပွငျမှာ ထှကျဆော့ရတဲ့ ကလေးဘဝကို သတိရမိပါသလား? ၂၀၁ရခုနှဈက စဈတမျးတဈခုအရ အသကျ၁၂ မှ၁၅နှဈကလေးတှဟော ဗီဒီယိုဂိမျးကစားခွငျးဖွငျ့ တဈပတျကို ၁၂.၂နာရီဝနျးကငျြလောကျ သုံးကွတယျလို့ဆိုပါတယျ။ နညျးပညာတှေ တိုးတတျလာတာနဲ့အမြှ ကမ်ဘာကွီးက ပွောငျးလဲသှားသလို လူတှရေဲ့အမူအကငျြ့တှေ၊ ဓလတှေ့ကေလညျး ပွောငျးလဲသှားခဲ့ပါတယျ။ ဥပမာ- စမတျဖုနျးတှေ၊ နညျးပညာတှေ မတိုးတတျခငျတုနျးက မိုးအေးအေးနဲ့ စောငျခွုံပွီး ကာတှနျးစာအုပျဖတျရတဲ့ ကလေးဘဝက အရသာကို ယခုခတျေကလေးတှေ သိနိုငျမှာမဟုတျပါဘူး။ ယခုခတျေမှာ ကလေးတှဟော စာအုပျအစား ဖုနျးတှေ၊ အငျတာနကျတှနေဲ့ အခြိနျကုနျလာကွလို့ပါ။ ဒါ့ကွောငျ့ ယခငျအခြိနျတုနျးကနဲ့ ယခုအခြိနျမှာ ကမ်ဘာကွီးဟာ ဘယျလောကျတောငျ ပွောငျးလဲသှားလဲဆိုတာကို ရုပျပုံလေးတှနေဲ့အတူ မြှဝပေေးခငျြပါတယျ။ ဒီရုပျပုံလေးတှကေို သငျမွငျတဲ့အခါ ယခငျက လှမျးဆှတျဖှယျအခြိနျလေးတှကေို သတိရမိနမှော မလှဲပါဘူး။
၁။ လူသားမြားနှငျ့ သူတို့ရဲ့ကှနျပွူတာ အသှငျအပွငျ
ယနခေ့တျေမှာ ကြှနျတျောတို့ဟာ ကနျြးမာရေးပွဿနာတှကေို မကွာခဏ တှကွေုံ့လာရပွီး အဝလှနျခွငျးကလညျး စိုးရိမျစရာတဈခုဖွဈလာပါတယျ။ပါတယျ။ ဒါက ကှနျပွူတာပျေါမှာ အရမျးကို မှီခိုလာကွပွီး ကြှနျတျောတို့ရဲ့နရေ့ကျတှကေို ကှနျပွူတာပျေါမှာပဲ အခြိနျကုနျလာတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ယနမှေ့ာ ကြှနျတျောတို့ဟာ သူတို့ကို လုံးဝစှဲလမျးနပေါပွီ။
လမျးခှဲမှုတဈျခုပျေါမှာ နာကငျြခံစားရခွငျးဆိုတာ အတိတျက အရာတဈခုပါ။ မြိုးဆကျသဈတှဟော ဆုံးရှုံးသှားတဲ့အရာတှနေဲ့ လူတှအေပျေါမှာ ပူဆှေးလှမျးဆှတျနခွေငျးမရှိဘဲ လကျတှကေ့လြှနျးနကွေပါပွီ။ သူတို့ဟာ စူးစမျးရှာဖှသေူတှနေဲ့ စှနျ့စားမှု ရှာဖှသေူတှဖွေဈကွပါတယျ။ အသညျးကှဲတာကို ခရီးသှားတာနဲ့ ဖွဖြေောကျကွပါတယျ။
ယခုမှာ တဈယောကျနဲ့ တဈယောကျအရမျးခဈြကွတဲ့ စုံတှဲတှတေောငျမှ ဝေးကှာမှုက အခြိနျကွာလာရငျ သူ့အလိုလို အခဈြတှေ သှေးအေးသှားတတျကွပါတယျ။ ယနမှေ့ာ စုံတှဲတှအေကွား အကွီးမားဆုံးအတားအဆီးက နညျးပညာ သုံးစှဲမှုတှေ တိုးမွှငျ့လာလို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
သငျ့ဘဏျအကောငျ့ထဲကနေ ပိုကျဆံထုတျဖို့ လူတနျးရှညျကွီး တနျးစီပွီး စောငျ့ဆိုငျးရတဲ့ အခြိနျကို မှတျမိပါသလား? ယခငျက ပိုကျဆံတဈခါထုတျဖို့ စာရှကျစာတမျးတှေ အမြားကွီးနဲ့ အခြိနျကုနျခံစောငျ့ဆိုငျးခဲ့ကွရပါတယျ။ ယနမှေ့ာတော့ အလှယျတကူငှထေုတျလို့ရတဲ့အပွငျ ဘယျအခြိနျသှားထုတျထုတျ ရတာကွောငျ့ အခြိနျလညျး ကုနျစရာမလိုတော့ပါဘူး။
ရုပျရှငျရုံထဲမှာ ခွငျကိုကျခံပွီး ရုပျရှငျထိုငျကွညျ့ရတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှကေို မလေို့ကျပါတော့။ ယနမှေ့ာ အဲကှနျးအေးအေးလေးနဲ့ 3D ၊ 4D ရုပျရှငျတှေ အဆငျ့မွငျ့မွငျ့ ကွညျ့နိုငျသလို ကိုယျ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျကားထဲမှာတောငျ ရုပျရှငျကွညျ့နိုငျပါတယျ။ ဒါကို drive-in theaters လို့ချေါပါတယျ။
၆။ ကြောငျးတှမှော စာသငျတဲ့အခါ
အရငျတုနျးကလို စာမရလို့ ဆရာမအပွဈပေးမလား? ကွိမျလုံးနဲ့ရိုကျမလား? လို့ စိုးရိမျကွောကျလနျ့စရာမလိုတော့ပါဘူး။ ဥပဒတှေေ၊ နညျးပညာတှေ တိုးတတျလာတာနဲ့အမြှ ဆရာ/ဆရာနဲ့ ကြောငျးသားတှဟော ပြျောပြျောပါးပါး စာသငျလို့ရနပေါပွီ။
၇။ လူဦးရေ ထူထပျမှု
ယနေ့ Public places တှမှော စုပွုံပွှတျသိပျနကွေပါပွီ။ ကမ်ဘာ့ရဲ့ဒသေအမြားအပွားမှာ လူဦးရေ တိုးပှားမြားပွားလာတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ယခငျကလို တိတျဆိတျငွိမျသကျတဲ့ ပတျဝနျးကငျြမှာ တိုကျကွီးဆောကျပွီး အေးအေးခမျြးခမျြးနလေို့မရတော့ပါဘူး။ ယနမှေ့ာ လူဦးရထေူထပျလာတာနဲ့အမြှ အိမျအကွီးတှကေို အသေးစားတိုကျခနျးမြားဖွငျ့ အစားထိုးလာကွပါပွီ။ ပထမတဈခကျြက ကနျ့သတျနရောတှနေဲ့ ငှကွေေးတတျနိုငျမှုတှေ ကဆြငျးသှားခဲ့ကွလို့ပါ။
၉။ မိတျဆှတှေကေို စကားပွောတဲ့အခါ
ကြှနျတျောတို့မှာ ယခုအခါ သူငယျခငျြးနဲ့တှဆေုံ့ဖို့ အခြိနျတောငျ မရှိကွပါဘူး။ ဟဲလိုလို့ ပွောဖို့ ဆိုရှယျမီဒီယာတှပေျေါမှာ မှီခိုနကွေရပါတယျ။
၁၀။ ကလေးတှေ ဘယျလိုဆော့ကစားလဲ
တဈနတေ့ဈနေ့ ကစားရမယျ့အခြိနျကို စောငျ့ဆိုငျးနရေတဲ့ ကလေးဘဝကို မှတျမိပါသလား? အရငျတုနျးက ကလေးတှကေ အတူတူကစားကွပွီး ကစားဖို့ အပွငျသှားရလရှေိ့ပါတယျ။ ဒါက ကလေးတှအေတှကျ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ လကေ့ငျြ့ခနျးကိုသာ ပေးတာမဟုတျပါဘူး။ သူတို့ရဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးကိုလညျး ပိုမိုအားကောငျးစခေဲ့ပါတယျ။ သို့သျောလညျး ယနကေ့လေးတှရေဲ့ရငျးနှီးမှုက သူတို့အကွိုကျဆုံး ဗီဒီယိုဂိမျးရဲ့ ရီမုကှနျထိုးပျေါမှာသာ ရှိနပေါတယျ။
တဈယောကျယောကျနဲ့ ဆကျသှယျဖို့ တယျလီဖုနျးအျောပရတောနှငျ့အတူ နိုငျငံရပျခွားချေါဖို့ ကွိုတငျစာရငျးပေးရတဲ့ အခြိနျတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာ သငျ့အိပျကပျထဲက တဈပွားတဈခပျြမှမကုနျဘဲ video call ချေါလို့ရပွီး live chat လို့ ရနနေိုငျပါပွီ။
အရငျက ပြျောရှငျဖို့အတှကျ လမျးပျေါမှာ ကစားတာ၊ အိမျမှာ ပါတီလုပျတာ၊ ပြျောပှဲစားထှကျရတာတှေ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ယနမှေ့ာ ကလေးတှအေားလုံးရဲ့ ပြျောရှငျမှုနဲ့ မြှဝမှေုက ဗီဒီယိုဂိမျးတှေ၊ မိုဘိုငျးဖုနျးတှနေဲ့ ကှနျပြူတာတှပေဲ ဖွဈပါတယျ။
စုပုံနတေဲ့ ဖိုငျတဈထပျကွီးနဲ့ ရုံးမှာ အခြိနျကွာကွာလုပျရတဲ့အလုပျတှကေို ယနေ့ အိမျမှာသကျတောငျ့သကျသာအလုပျလုပျရတဲ့ ရှေးခယျြမှုမြားနဲ့ အစားထိုးလာကွပါပွီ။ ယနနေ့ညျးပညာကွောငျ့ပဲ အလုပျလုပျရတာ ပိုမိုလှယျကူလာပွီး အခြိနျကုနျသကျသာလာပါပွီ။
၁၄။ မိသားစု တညျဆောကျမှု
အိမျထောငျကပြွီး မိသားစုနဲ့တဈအိမျထဲ စုနကွေတဲ့ ဓလဟေ့ာ တဖွညျးဖွညျး အတိတျမှာ ကနျြခဲ့ပါပွီ။ ယနမှေ့ာ အမြားစုဟာ နြုကလီးယား မိသားစုတှပေါပဲ။
သငျ့အတှကျ ဒီဆယျစုနှဈကာလအတှငျးမှာ ဘယျလိုတှေ ပွောငျးလဲသှားပါသလဲ? သငျ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံလေးမြားကို မြှဝပေေးနိုငျပါတယျ။
Previous articleလိမ္မာချင်လို့ ဆုံးမပေမဲ့ မိမိရဲ့ ဆုံးမမှုက နည်းလမ်းမှားနေတဲ့အခါ သင့်ကလေးက ဆိုးသွမ်းမသိ ဆိုးသွမ်းလာပါတယ်။
Next articleဘဝမှာ တစ်ခေါက်လောက် ရူးရူးမူးမူး ရောက်ဖူးချင်တဲ့ နေရာလေးများ